Kuwa hadlaa ee ugufiican ee la bixiyo Maalinta Aabaha | Androidsis
Hadlayasha ugufiican ee la bixiyo Maalinta Aabbaha
Haaruun Rivas | | Qalabka kale, Streaming
The Maalinta Aabbaha, taariikh xusid mudan oo shaqooyinka barayaashan lagu sharfo hadiyado iyo soo bandhigid kalgacal.
Kadib markaan kahadlay maxay yihiin qalabka qalinka ugu fiican, darawallada adag iyo kaararka xusuusta, iyo waliba kiniiniyada ugu fiican iyo kumbuyuutarrada qaaska ah ee la bixiyo Maalinta Aabbaha, hadda waxaan keenaynaa iskudubarid cusub, oo wax ka qabta kuwa hadla ee ugufiican ee labixin karo bisha soo socota ee Maarso 19.
1 La yaab maalinta Maalinta Aabbaha kuwa ugu fiican ee ku hadla Amazon
1.1 Amazon Echo Dot (3rd gen.)
1.2 Kacdoonka JBL 4
1.3 Google Nest Mini (2nd gen.)
1.5 Dhamaadka Ears Megaboom 3
La yaab maalinta Maalinta Aabbaha kuwa ugu fiican ee ku hadla Amazon
Waxaan ku guuleysanay inaan liis garaynno afarta kuhadal ee ugu fiican ee aad ka iibsan karto Amazon Spain, waana kuwa soo socda:
Hadalka ugu muhiimsan ee caqliga badan ee Amazon, hoos buu hoos u dhigaa. Midkani wuxuu u taaganyahay naqshad dhar ah oo duubmaya iyo muuqaal ku habboon jawi kasta. Si kastaba ha noqotee, taasi maahan barta ugu soo jiidashada badan; tan, taa bedelkeeda, waa xaqiiqda taas wuxuu la yimaadaa Alexa, kaaliyaha caqliga badan ee Amazon ee ka caawiya fulinta iyo fududeynta howlaha adoo adeegsanaya amarrada codka (hakad ama badal heesaha, hubi saadaasha hawada oo xakamee aaladaha guryaha ama weydii su'aalo mahadsanid isku xirnaanta Bluetooth, tusaale ahaan).
Alexa wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho codkaaga si aad u codsato hees, farshaxan, ama album. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad leedahay aaladaha Echo oo ku faafay dhowr qol, waxaad gurigaaga oo dhan ka buuxin kartaa muusiko. Echo Disc-ka (3-aad Gen) waxaad sidoo kale ku dhageysan kartaa idaacadaha iyo sheekooyinka buugaagta.
Afayeenka ayaa ciyaaraya muusikada u sii deynaya Amazon Music, Spotify, TuneIn iyo adeegyo kale oo la mid ah, sidaas ahaanshaha mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee suuqa. Tan waa in lagu daraa xaqiiqda ah dhawaqa ay soo saareyso waa istiraayo oo tayo sare leh.
La kulan Echo Dot - aftahankeenna ugu caansan uguna caansan. Waxay ku timaaddaa naqshad dhar ah oo dhammaystiran oo ku habboon ...
Muusikada codkaaga ku xakamee: heesaha ka sii daa Amazon Music, Spotify, TuneIn iyo adeegyo kale.
Cod sare, hodan ah: Labalaab Echo Dot labaad (3aad Gen) dhawaq ...
Diyaar u ah inuu kaa caawiyo: weydii Alexa inuu muusiko garaaco, ka jawaabo su'aalaha, ka sheekeeyo wararka, hubi ...
Kacdoonka JBL 4
JBL Charge 4 maahan afhayeen leh qaabab caqli badan, laakiin waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee hawada sii daaya. Tani waxay awood u leedahay abuurista a 30 W maqal ah (RMS) mahadsanid geesihiisa xoogga leh ee bixiya baasaaska wanaagsan oo calaamadeysan, in kasta oo ay yihiin halbeegga oo aan ahayn jihada rikoodhada. Thanks to Bluetooth 4.2 isku xirnaanta iyo JBL Connect + teknolojiyadda, waxay awood u leedahay inay isku xirto oo la waafajiso ilaa 100 ku hadla oo leh tiknoolajiyad isku mid ah oo loogu dhawaaqo qolal kala duwan. Waxa kale oo lagu xidhi karaa laba taleefan oo isku mar ah.
Waad ku mahadsan tahay awooda batari ee 7,800 Mah, si joogto ah ayuu u ciyaari karaa muusikada illaa 20 saacadoodayay tiri shirkadda. Waxa kale oo lagu quusin karaa biyo maxaa yeelay waxay leedahay a IPX7 la xaqiijiyay waxayna u shaqeysaa sidii bangi awood u leh inuu qalabka ka qaado.
JBL Charge 4 - Afhayeenka ...
In laxanka uusan istaagin; ku dhagayso ilaa 20 saacadood oo muusigga aad ugu jeceshahay cod aad u sareeya oo saafi ah mahadsanid ...
Ha ka welwelin batteriga mar dambe; ka dhagayso miyuusigaaga afhayeenka JBL ee loo yaqaan "Charge" awooddiisa awgeed ...
Qorraxda, xeebta iyo kuwa biyaha kugula hadla: u isticmaal barkadda dhexdeeda ama intaad la maydhanayso kuwan ku hadla qallafsan ...
Afayeenka wireless-ka wuxuu leeyahay cod tayo sare leh iyo Bluetooth, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku xirto ilaa 2 taleefoon gacmeed ama ...
Tani waa mid ka mid ah kuwa ku hadla smart smart suuqa, laakiin taasi maahan sababta aysan uga mid ahayn kuwa aad siin kartid Maalinta Aabbaha si aad ula yaabto. Waxay leedahay shaqooyinka caadiga ah ee ku hadla af-haye caadi ah: Isku xirnaanta Bluetooth (v5.0) si loogu xiro aaladaha elektarooniga ah (taleefannada, tusaale ahaan) waxayna taageertaa amarrada codka si loo xakameeyo muusikada iyo waxyaabo kale oo badan, iyo waxyaabo kale.
Waxay kaloo leedahay 802.11 Wi-Fi (2.4GHz iyo 5GHz) waxaana lagu dhejin karaa darbiyada ujeeddooyin qurxin ah. Intaas waxaa sii dheer, marka la eego dhawaqa ay soo saarto, waa mid aad u fiican oo cod dheer, in kasta oo uu yar yahay oo aad u kooban yahay.
El Sonos One SL waa ku hadla kale caqli badan oo ku faanaa dhisme is haysta iyo bilicsanaanta. Way fududahay in la rakibo, sida kuwa kale, waxay taageero u leedahay isku xirnaanta Bluetooth si ay ugu xirmaan aalado kale. Waxay sidoo kale la timaaddaa Wi-Fi oo waxay noqon kartaa mid lagu xakameeyo codka waxayna ku xirnaan kartaa kuwa kale ee ku hadla isla taxanaha si ay u gaarsiiyaan dhawaq ballaadhan.
Hadalkan, waalidku waxay ku raaxeysan karaan dhawaaq awood leh oo quusin ah kuna xakameyn kara barnaamijka Sonos, Apple AirPlay 2 iyo in ka badan. Sidaas darteed, waxay ku habboon tahay kaaliyaha codka ee Siri iyo adeegyada kala duwan ee muusikada sida Apple Music.
Sonos | Hal SL Afhayeenka ...
Afayeenka xoogga leh ee aan makarafoonka ku raaxeysaneyn muusigga iyo in ka badan; Ku raaxayso codka xoogga leh ee quusin ...
Ku xidho adoo adeegsanaya Wi-Fi aalad koontaroolaysa codka (echo dot ama google home), ama iPhone ama iPad si aad ugu ciyaarto ...
Hal sl wuxuu ku siinayaa naqshad kooban, laba nooc oo ah kumbiyuutarro kumbuyuutareedyo dijitaal ah oo la jaan qaadaya naqshadaha acoustic iyo ...
Ku xir fiilo adoo adeegsanaya wlan illaa sonos hal sl oo u isticmaal sida kuwa gadaal gadaal ka hadlaya ama, haddii aad doorbido, inaad ...
Dhamaadka Ears Megaboom 3
Ultimate Ears Megaboom 3 waa afhayeen la mid ah JBL Charge 4. Midkani ma ahan mid caqli badan, laakiin wuxuu soo bandhigayaa astaamo sida awood, cod tayo sare leh, IP67-fasalka iska caabbinta biyaha iyo qulqulka, 360 ° dhawaaqa wareega (stereo), isku xirnaanta Bluetooth oo gaaraya ilaa 45 mitir oo kala duwan, iyo batari gaari kara madax-bannaanida ilaa 20 saacadood.
Dhagaha Ultimate Megaboom 3 ...
360 ° Codka Meelaha: MEGABOOM 3 kuhadalka wireless wuxuu bixiyaa dhawaq awood badan, saafi ah oo dhex gala oo leh faafin ...
Dhawaaq dheer oo Sax ah: Ciyaar, hakad oo ka bood heesaha afhayeenka; riix si loo xakameeyo loo maqli karo ee ...
Lacag Bixinta Socda: Eedaha fiilo la aanta leh ee saldhigga AWOODDA UP, oo aan lagu darin, taas oo ku xirmeysa ilo awood ...
20 Saacadaha Awoodda: Waxaa ku jira batteri yar oo 20 saacadood soconaya; mahadsanidiin tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Hadlayasha ugufiican ee la bixiyo Maalinta Aabbaha
Maxamed Saalax oo noqday Safiirka Oppo
Nubia Red Magic 5G waa rasmi oo leh shaashadda 144 Hz, Snapdragon 865 iyo dareeraha iyo qaboojinta qaboojinta